Shaqo-socodka: Hab-dhaqannada ugu Wanaagsan ee is-waafajinta Waaxda Suuqgeynta Maanta | Martech Zone
Da'da suuqgeynta waxyaabaha, ololayaasha PPC iyo barnaamijyada moobiilka, aaladaha qadiimiga ah sida qalinka iyo warqadda meel kuma laha muuqaalka suuqgeynta firfircoon ee maanta. Si kastaba ha noqotee, waqti iyo waqti, suuqleyda waxay ku noqdaan qalab casri ah oo hawlahooda muhiimka ah, ka tagista ololayaasha u nugul qaladka iyo isgaarsiinta.
Hirgalinta shaqooyinka isdaba-joogga ah waa mid ka mid ah hababka ugu caqliga badan ee looga takhalusi karo wax-qabadyadan. Iyada oo qalab wanaagsan meesha yaal, suuqleyda ayaa tilmaami kara oo otomaatigikaraya shaqadooda ugu badan ee soo noqnoqda, howlaha culus, yareynta halista khaladaadka iyo abuurista shabaq nabadeed si looga hortago dukumiintiyada lagu lumiyo sanduuqa. Ayadoo la hagaajinayo socodka shaqada, suuqleyda waxay saacado dib ugu helaan usbuucooda si ay u qorsheeyaan una fuliyaan ololeyaal faahfaahsan si dhaqso iyo hufan.
Otomatigu waa bar bilow fudud oo lagu riixo waxqabadyada caadiga ah, laga soo bilaabo dib u eegista fikradaha hal abuurka ah illaa ansixinta miisaaniyadda, mustaqbalka. Si kastaba ha noqotee, wax isbeddel ahi ma aha caqabado la'aantiisa. Kuwani waa laba ka mid ah qodobbada ugu muhiimsan ee xanuunka ee ururradu la kulmaan marka ay horay ugu socdaan qalabaynta aaladda shaqada, iyo sida ay suuqyadu ugu wareegi karaan hareerahooda:
Waxbarashada: Si guul leh u korsaday tikniyoolajiyadda otomaatiga shaqada waxay kuxirantahay helitaanka taageerada waaxda buuxda (ama, ururka). Tikniyoolajiyadda hal-abuurka ah - iyo gaar ahaan otomaatigga - ayaa dhalisay walaac ku saabsan amniga shaqada tan iyo kacaankii warshadaha. Walwalkaan, oo inta badan aan ka imaanayn tikniyoolajiyadda laakiin laga qabo cabsi fudud oo aan la garanayn, ayaa carqaladeyn karta korsashada ka hor inta aysan xitaa billaabin. Inta badan hogaamiyaasha suuqgeynta ayaa kooxahooda ka baraya qiimaha otomaatiga, way sahlanaan doontaa in la yareeyo culeyska isbedelka. Bilawga nidaamka waxbarashada, otomatiga ayaa loo baahan yahay in loo dhigo sidii qalab baabi'inaya waxyaabaha aan loo baahnayn ee shaqooyinka suuqleyda. , ma aha mashiin beddelaya qofka. Awoodda otomaatiggu waa inay ka saarto howlaha culus sida silsiladaha emaylka ee muddada dheer inta lagu jiro nidaamka oggolaanshaha. Banaanbaxyada doorka gaarka ah ama fadhiyada tababarka ayaa ah hal dariiqo oo loogu oggolaado shaqaaluhu inay indhahooda ku arkaan qaababka ay maalintooda shaqo u hagaageyso. Tirinta waqtiga iyo dadaalka shaqaaluhu waxay ku keydin doonaan waajibaadka guud sida dib u eegista wax ka beddelka hal abuurka ama oggolaanshaha qandaraaska waxay siinaysaa suuqleyda faham aad u badan oo la taaban karo oo ku saabsan sida tikniyoolajiyaddu u saameyn doonto maalin-ka-maalin.
Laakiin waxbarashadu kuma dhamaan karto nus maalin kulan ama tababar. U oggolaanshaha isticmaalayaasha inay wax ku bartaan xawaareygooda iyadoo loo marayo kal-fadhiyo tababar hal-hal ah iyo kheyraadka internetka oo awood u siinaya suuqleyda inay mas'uul ka noqdaan hannaanka korsashada. Qoraalkaas, suuqyayaashu waa inay si dhow uga qayb qaataan markay soo saarayaan khayraadkan. In kasta oo go'aanka lagu gaadhayo dijitaalka laga yaabo inuu ka yimaado xagga sare oo waaxda IT-ga ay u badan tahay inay noqdaan kuwa horumarinaya qulqulka shaqada, suuqleyda ayaa ugu dambeyn ogaan doonta kiisaskooda adeegsiga iyo mashruuca ugu fiican. Abuuritaanka qalab waxbarasho oo loogu talagalay waxqabadyada gaarka ah ee waaxda suuq-geynta halkii ay ka ahaan lahayd IT jargon waxay siinaysaa dadka isticmaala dhamaadka sabab ay ugu sii maal gasho dadaalka korsashada.
Nidaamyada la qeexay: Sharciga "qashinka ku jira, qashinka banaanka" ayaa gebi ahaanba lagu dabaqayaa otomaatiga socodka shaqada. Qalabaynta nidaam hawleed gacmeed jaban ama si liidata loo qeexay ma hagaajin doono arrinta salka ku haysa. Kahor socodsiinta howlaha kumbuyuutareedka, waaxaha suuqgeynta waa inay awoodaan inay karti uyeelaan hababkooda si loo hubiyo in howlaha bilowga ah ay kiciyaan ficilada isku xigxiga ee habboon. Inkasta oo shirkadaha badankood ay fahmaan socodsiintooda shaqo guud ahaan, nidaamyadan sida caadiga ah waxaa kujira dhowr talaabo oo umuuqda kuwo yar yar oo looqaaday si qaas ah oo badanaa la ilaaway inta lagu gudajiray kala guurka dhijitaalka ah. u guurista wajiga daabacaadda. Si kastaba ha noqotee, talaabooyinka loo qaaday saxiixa iyo dhinacyada ku lugta leh habka tafatirka wey ku kala duwanaan karaan waaxyo badan. Hadday suuqyayaashu awood u leeyihiin inay wax ka beddelaan hannaanka gaarka ah ee hawl kasta markaa sameynta aalada shaqada waa nidaam fudud.
Aaladda tooska ah geeddi-socod kasta oo ganacsi waxay u baahan tahay faham qoto dheer oo ku saabsan tallaabooyinka, dadka, iyo dowladnimada ku lugta leh si looga fogaado madmadowga saamaynta xun ku yeelan kara natiijada ugu dambeysa. Maaddaama tiknoolijiyada socodka shaqada ficil ahaan loo fulinayo, suuqleyda waa inay muhiim u ahaadaan baaritaanka waxtarka howlaha otomaatiga ah marka la barbar dhigo dhiggooda gacanta. Xaaladaha xaaladaha ugu fiican, otomatiga aaladda shaqada waa dadaal socod ah oo ka caawiya waaxyaha suuqgeynta inay si joogto ah u horumariyaan.
Fursado aan dhamaan
Aasaasidda socodka shaqada otomaatig ah waxay noqon kartaa barta laga bilaabo kala-guurka weyn ee dhijitaalka ah ee ka jira goobta shaqada. Waaxyada suuq geynta waxaa inta badan afduub ahaan loogu heystaa qulqulatooyin shaqo oo gaabis ah oo aan tayo laheyn taasoo ka dhigeysa waqti yar qorshaha qorshaynta iyo hirgalinta. Otomaatiga, marka si buuxda loo qorsheeyo loona hirgaliyo iyadoo aqoon buuxda looga haysto caqabadaha ka dhalan kara, waa talaabo dhanka saxda ah loo qaadayo. Marka shaqooyinka socodka ay yaalliin oo ay si habsami leh u socdaan, suuqleydu waxay bilaabi karaan inay ku raaxaystaan ​​waxsoosaarka korodhay iyo iskaashiga la imanaya qulqulka shaqada tooska ah.
Naqshadeeyaha Shaqada ee 'SpringCM'
Naqshadeeyaha Shaqada ee 'SpringCM' waxay bixisaa khibrad isticmaale oo casri ah si loo dejiyo qulqulka shaqada ee ficilada lagu qaado feyl, fayl, ama xitaa nidaamyada dibedda sida Salesforce. Qalabaynta howlaha maamulka, bilow bilowga shaqada, ama tag dukumiintiyada iyo warbixinnada. Tusaale ahaan, waxaad abuuri kartaa sharciyo si otomaatig ah dukumiinti shaqsi ah ama koox dukumentiyo la xiriira ugu geeyo gal gaar ah. Ama qeex raadinta, astaamaha gaarka ah ee la jaan qaada nidaamyada Maareynta Xiriirka Macaamiisha (CRM) isla markaana si toos ah ugu xirma dukumiintiyada qaarkood si ay uga caawiyaan raadinta iyo soo gudbinta.
Xeerarka Smart kuu oggolaanayaa inaad sameysid otomaatig wax-ku-ool ah oo wax ku ool ah ama aan lahayn lambar sir ah Si otomaatig ah ugu wareeji qandaraasyada ama dukumiintiyada dadka gudaha ama dibedda kooxdaada. Nidaamyada shaqo ee horumarsan ayaa si gaar ah waxtar u leh inta lagu jiro qandaraaska ama dukumiintiyada abuurka markaad adeegsan karto xog horay loo sii dejiyay si loo yareeyo khaladaadka aadanaha, otomatiga u qaybinta oggolaanshaha, iyo diiwaangelinta noocyada la oggolaaday ee isdhexgalka isticmaalaha ugu yar
Raadinta saxda ah waxay u saamaxdaa isticmaaleyaasha inay si dhakhso leh ula socdaan dukumiinti iyagoo raadinaya metadata sida taariikhda qandaraaska la bilaabayo ama magaca macaamiisha. Waad qeexi kartaa sida loo calaamadeeyo dukumiintiyada iyadoo loo eegayo baahidooda ganacsi ee gaarka ah. Tilmaamahan ayaa la jaan qaadi kara CRM-yada si ay u sii hayaan kooxaha iibka ee la shaqeeya isla macluumaadka macaamiisha isla markaana looga faa'iideysan karo inay la socdaan qandaraasyo ay ku jiraan qodobo aan caadi ahayn ama gorgortan ah.
Tags: shaqooyinka isdaba-joogga ahCRMmaamulka xiriirka macaamiishasuuq geyn firfircoonsuuq-geynta suuqasocodka shaqada suuq geyntaiibinsocodka shaqada iibkagugacmtikniyoolajiyadda otomaatiga shaqadashaqeynaya
Erik wuxuu soosaaraayay badeecooyin cusub wuxuuna keenay suuq muddo 20 sano ah, taasoo keentay boqolaal milyan oo doolar oo kabax ah iyo dakhli soosaaray. Istaraatijiyad hor leh ka hor Xilliga Gu'ga, Erik wuxuu ahaa Aasaasihii iyo Maamulaha shirkadda 'SimpleRelevance', oo ah barxad barasho mashiin si heer sare ah loo bogaadiyo si loogu hagaajiyo suuq geynta dijitaalka. Sannadkii 2015, SimpleRelevance ayaa loo iibiyey Rise Interactive, halkaas oo Erik uu hoggaaminayey Istaraatiijiyadda Xisaabaadka iyo qaybaha ganacsiga ee shaqsiyeed.